ओलीसँग प्रचण्डका तीन असन्तुष्टि – Khabar Silo
असोज २९ गते विहान सवा ८ बजे बसेको पार्टीकोे सचिवालय बैठकमा अघिल्ला दिनमा सहमति भएका कुनै एजेन्डामा छलफल नै भएन, प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई म्यानमार भ्रमणको विदाई गर्न त्रिभुवन विमानस्थल जान हतारिए। त्यसलाई प्रचण्डले एकता प्रकृयामा ओली गम्भीर नभएकाे रुपमा लिए।जिम्मेवारी बाँडफाँटका विषयमा सहमति गरेर सम्बन्ध सुधार गरेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुई अध्यक्षहरुबीच दुई महिनामै असन्तुष्टि चुलिएको छ।
स्वास्थ्य उपचारका लागि गत भदौ ५ गते सिंगापुर जानुअघि दुवै नेताहरुबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्ने सहितका विषयमा सहमति भएको थियो। दुई महिनामै दुई अध्यक्षबीच मुख्य तीन विषयलाई लिएर अन्तरविरोध सुरु भएको हो।
अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजी, रिक्त रहेको सभामुख पदमा पार्टीको उम्मेवार चयन र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने विषयमा दुवै अध्यक्षबीच मतभेद देखिएको हो। प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने सहमति कार्यान्वयन नभएकै समयमा इन्डो प्यासेफिक र सभामुखको मुद्दा थपिएको हो।
प्रधानमन्त्रीसँग बालुवाटारमै पुगेर दैनिकजसो भेटघाट गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डले शनिबार ओलीको आग्रहलाई लत्याएका छन्। ओलीले छलफलका लागि बोलाएपछि उनी शनिबार बालुवाटार नगई उपत्यका बाहिर गएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार मात्रै नभएर पार्टीको सम्पूर्ण निर्णयहरु आफू अनुकुल हुनेगरी बनाउन खोजेपछि प्रचण्ड झस्केका हुन्।
समाजवादको यात्रा, तत्कालिन एमालेको सांगठनिक संरचनालाई आफ्नो लिडरसीपमा हाक्ने अपेक्षा गरेर २०७५ जेठ ३ गते एमालेसँग पार्टी एकतामा हाम फालेका प्रचण्ड अर्का अध्यक्ष ओलीबाट पूर्वसहमति कार्यान्वयन नहुने अवस्था देखेपछि असन्तुष्ट बनेका हुन्। उनले यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन गराउन सचिवालयको बैठकमै जोड दिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसको सुनुवाई गरेका छैनन्। ओलीको यस कदमबाट प्रचण्ड सबैभन्दा बढी अप्ठेरोमा परेका छन्।
पार्टी एकता हुँदा दुवै नेताहरुबीच शक्ति र जिम्मेवारी बाँडफाँट सम्बन्धमा पाँच बुँदे लिखित सहमति भएको थियो। तर, ओलीले बिभिन्न बहानमा सो सहमति कार्यान्वयन गर्ने ढिलाइ गरेको प्रचण्डको बुझाइ छ। हालै एक दैनिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सहमति बेगर कसैले केही पाउन नसक्ने भन्दै खुला चुनौती दिएका थिए।
प्रचण्ड र ओलीबीचको मतभेद बढ्नुको अर्काे विषय भनेको पार्टी एकता प्रक्रिया नटुंगिनु पनि हो। पार्टी एकता टुंगाउनेगरी प्रधानमन्त्रीसँग पछिल्ला दिनहरुमा पटक–पटक छलफल भए पनि अन्तिम निर्णय नहुनुमा प्रधानमन्त्रीको भूमिका रहेको प्रचण्ड बुझाई छ। जुन कुरालाई प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरुले अस्वीकार गरेका छन्।
असोज २९ गते बुधबार बसेको नेकपा सचिवालय बैठकबाट पार्टी एकताको सबै काम सकाउने तयारी भएको थियो। नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि सचिवालय बैठकले एकताको अन्तिम निर्णय गर्ने बताएका थिए। तर, बैठकले उपनिर्वाचनको लागि उम्मेवारको नाम पठाउन सम्बन्धित प्रदेश कमिटीलाई निर्देशन दिनुबाहेक अरु निर्णय नै गरेन।
प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डबीच असोज २७ गते झण्डै दुई घण्टा बालुवाटारमा छलफल भएको थियो। दुई अध्यक्षले एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउने, मन्त्रिमण्डल फेरबदल गर्ने र रिक्त सभामुख पद आफ्नै पार्टीबाट राख्ने विषयमा छलफल गरेका थिए। तर, असोज २९ गते विहान सवा ८ बजे बसेको पार्टीकोे सचिवालय बैठकमा अघिल्ला दिनमा सहमति भएका कुनै एजेन्डामा छलफल नै भएन, प्रधानमन्त्री ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई म्यानमार भ्रमणको विदाई गर्न त्रिभुवन विमानस्थल जान हतारिए। त्यसलाई प्रचण्डले एकता प्रकृयामा ओली गम्भीर नभएकाे रुपमा लिए। निर्णायक भनिएको बैठकमै एकता प्रक्रियाका विषयले प्रवेश नपाएपछि उनको चित्त बुझेन।
‘एकताप्रति पुर्वएमाले र माओवादी केन्द्रबीचमा असन्तुष्टि चुलिएको छ, प्रचण्ड आँफै पनि एकता गर्नु गल्ती भएको ‘रियालाइजेसन’मा पुगेको’ नेकपाका एक नेताले नेपालखबरसँग बताए। त्यसो त माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेर पार्टी झन् भद्रगोल बन्दै गएको भन्दै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा समेत विश्लेषण भइरहेको स्रोतले जनायो। प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डको स्वभावलाई लिएर विभिन्न खालका टिप्पणी गरेका छन्, उनी प्रचण्डको ‘चलायमान’ व्यक्तित्वसँग असन्तुष्ट बनेको बालुवाटार स्रोतले जनायो।
नेकपाका स्थायी कमिटी सदस्य मणि थापा पनि पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु ‘एकता गरेर गल्ती थियो’ भन्नेमा पुगिसकेको बताउँछन्। तर, एकताका बारेमा असन्तुष्टि चुलिए पनि पार्टी फुटतिर तत्काल जाने संभावना नरहेको थापाले दाबी गरे। प्रचण्ड निकट एक नेता पनि दुई अध्यक्षबीचमा ‘कार्यशैली’लाई लिएर केही मतमतान्तर रहेको स्वीकार गर्छन्। ती नेताले नेपालखबरसँग भने,‘अध्यक्षद्वयबीचको सम्बन्धमा केही समस्या देखिएका छन्, तर त्यो पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाका विषयलाई लिएर हो।’
पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष दिन आनाकानी
भदौ ५ गते स्वास्थ्य उपचारका लागि सिंगापुर जानुअघि ओलीले प्रचण्डलाई पार्टी बैठक सञ्चालनको अधिकार दिएका थिए। तर, २० दिनपछि नेपाल फर्केर उनले फेरि प्रचण्डलाई कार्यकारी अधिकार दिएनन्, बरु आफ्नै नेतृत्वमा बैठक राखे।
त्यसपछिका बैठकहरु ओलीकै अध्यक्षतामा बस्यो। यो विषयलाई लिएर पार्टीभित्र पनि बहस चल्यो तर ओलीले त्यसको परवाह नै गरेनन्। बरु आफूलाई रिझाउनु पर्ने अडानमा रहेको जस्तो व्यवहार देखाएको टिप्पणी हुनथाल्यो।
रिक्त रहेको सभामुख कसले लिने?
संसद सचिवालयमा काम गर्ने रोशनी शाहीलाई बलात्कार प्रयास आरोपमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि रिक्त पदमा पूर्व माओवादी केन्द्रकै दाबी रहेपछि ओली–प्रचण्डबीच छलफल भएको थियो। तर, ओली निकटका केही नेताहरुले अब हुने सभामुख आफ्नो पक्षबाट हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिन थालेपछि प्रचण्डले त्यसलाई राम्रो मानेका छैनन्।
पछिल्लो ‘लिङ्गरिङ’ त्यसै विषयमा केन्द्रित रहेको नेकपाका नेताहरुमा चर्चा छ। ‘एमालेभित्र माओवादी केन्द्रको विश्वास घट्दै गएको छ, माओवादी केन्द्रमा एमालेको भद्रगोल पार्टी सञ्चालन प्रक्रियाले अन्योलमा पारेको छ, जे भएपनि पछिल्लो मतभेदको कारण सभामुख आफ्नै मान्छेलाई बनाउनेमै केन्द्रीत छ’, स्थायी कमिटी सदस्य थापाले नेपालखबरसँग भने।
के हो इन्डो प्यासेफिक विवाद?
अमेरिकाले अघि सारेको इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीको बारेमा बारेमा प्रधानमन्त्री ओली र उनी निकट नेताहरु सफ्ट भएको बुझाइ प्रचण्ड तथा पूर्व माओवादीको रहेको छ । उनी स्ट्राटेजीमा नेपालले कुनै प्रकारको सहभागी नहोस् भन्ने चाहन्छन्।
प्रचण्डले चिनियाँ विदेशी मन्त्री वाङ यीसँग भेटमा पनि अमेरिकाका कथित इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीमा सहभागी नुहने बताएका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार एक दैनिक पत्रिकालाई अन्तर्वार्ता दिँदै इन्डो प्यासेफिक स्ट्राटेजीमा सहभागी नहुने बताए पनि त्यसै अन्तर्गतको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन(एमसीसी) संसदबाट पारित नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए। ओलीले तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदबाट एमसिसी पारित नगराएर गलत गरेको बताएका थिए। त्यसप्रति प्रचण्ड असन्तुष्ट रहेका छन्।
काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)भित्र दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सत्ता हस्तान्तरण वा पार्टीमा कार्यकारी अध्यक्षको विवाद भइरहँदा अर्का नेता माधवकुमार नेपाल भने मौन बसेका छन्। पार्टी एकताको बेला भएका समझदारी कार्यान्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्दै पार्टीका अध्यक्ष दाहालले पार्टीका नेतासँग गुनासो गर्दा नेपाल भने मौन बसेका हुन्। उनले पार्टीका पछिल्ला गतिविधि र […]